Cabdi Iley oo maanta maxkamad la hor keenay iyo dambiyadda uu Soomaalida ka galay oo dacwadda ka muuqan. – Xeernews24
30. Januar 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Maxakamada Ethiopia maxay ku soo eedaysay Cabdi Maxamuud Cumar Iyo muwaadiniinta kale ee la xidhan maxaa lagusoo eedeeyay maanta?
Madaxweynihi hore ee DDSI Cabsi Maxamud Cumar ayaa Maanta markale Maxkamad laso taagay iyadoona Xeer ilaalinta Ethopia ayaa sheegtay in 47 oo uu ugu horeeyo Madaxweynihii hore ee deegaan ka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa maanta dacwadooda la horgeeyay maxkamadda sare ee dalka Ittoobbiya.Xeer ilaalinta guud ayaa halkaa kusoo bandhigtay danbiyada loo haysto eedaysanayaasha oo ay kamid yihiin;
1.Aas-aasida iyo abaabulka koox loogu magac daray H E E G O oo ay dawladu ku bixisay qarash kabadan 9 milyan oo birr oo uu leeyahay xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha ee deegaanka islamarkaana loo qeybiyay teleefoono nooca Samsung galaxy-ga ah oo gaadhay 41 xabbo,iyaga oo sidoo kale la magacaabay 9 xubnood oo guddiga fulinta ah lagu qalabeeyay bastoolado. Kooxda ayaa loo furay bar facebook-ga ah oo loogu magac daray“Heego waa heegan“.halkaas oo ay ka faafinayeen dacaayado kadhan ah dawlada dhexe oo ay ku jiraan in Shidaalka,dahabka iyo kheyraadka deegaanka ay xoog ku qaadanayso,ayna doonayso in ay si sharcidaro ah udumiso xukuumada deegaanka ka jirta.Waxa kale oo ay sheegeen baa layidhi koox dani in qowmiyada Oromada oo adeegsanaysa ciidamadeeda federaalka ay la wareegayso dhulka Soomaaliyeed.
Sidda ku cad eedeeymaha maxkamadda la horkeenay HEEGO ayaa amar buuxa oo uu leeyahay madaxwey nihii deegaanka ee xilligaas Cabdi lagu siiyay,
● In ay iska horkeenaan shacabka deegaanka soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee la degan.
● Boob iyo dhac ay ugeystaan bangiyada iyo ganacsiyada qowmiyadaha kale.
● Gubida kaniisadaha ay qowmiyadaha kale magaalada kuleeyihiin.
● Abaabulka dhalinyarada gobolada iyo degmooyinka oo lagasoo dhaadhiciyo in shaqooyin lasiinayo haddio ay difaacaan nidaamka deegaanka kajira.
● In ay beegsadaan cid walba oo ay u arkaan in ay kasoo horjeedo amaba khatar kuyihiin maamulka deegaanka kajira.
● Amarka Madaxweynihii hore ayaa sidoo kale lasheegay in uu farayay ciidamada kahortaga rabshadaha ee looyaqaano“Armaa batenaaga“in ayna wax falcelin ah kasameyni karin howlgalada ay fulinayso kooxda heego islamarkaana ay xeryahooda ku ekaadaan.
Dacwad oogida xeer ilaalinta kadib ayay Maxkamadu amartay in eedeysanayaasha la siiyo fursad ay iskaga difaacaan qodobada lagusoo oogay islamarkaana maxkamada dib loogu soo celiyo 29ka bisha Tir ee kalandarka Itoobiya Inta kahoreysana lagu sii haayo xabsiga saxitaanka ee addis Ababa iyada oo waxii damiin ahna markaa kadib la eegi doono.Isla maxkamadda ayaa sidoo kale go’aamisay in eedaysane;Teddy lagusii daayo damiin kadib markii uu miiska dhigay adduun lacageed oo gaadhaya sideetan kun oo birr. (80,000).
Ugu danbayn sharciga Ethiopia ayaa mar walba cadaadis saara shacabka iyo maamulka Soomaalida meesha shacabka qowmiyadaha kale loola dhaqmo si naxariis leh.
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Maamulka Hargeysa oo quustii ugu danbaysay... Qalalaasaha iyo Furfurnaantu Miyay wada Socdaan?